Dhacdooyinka soosocda - DutchtownSTL.org
Dhacdooyinka Soosocda ee Dutchtown CID
Dhacdo on Abriil 20th @ 6:00 pm
Hadafka Guddiga Ururka Dutchtown waa inuu isu keeno bulshada si loo dhiso is afgarad iyo aragti guud, isu soo uruurinta kheyraadka, loona horseedo nooleynta. Gudigeenu wuxuu mideeyaa mutadawiciinta, lacag aruurinta, iyo shabakadaha isgaarsiinta ee wax walba ka dhiga.
Faahfaahin dheeraad ah ka hel Shirka Gudiga Ururka Dutchtown
DT2 Saacadaha Kadib: Cusboonaysiinta UrbanMain
Dhacdo on Abriil 22nd @ 5:30 pm
Ku biir DT2 · Downtown Dutchtown loogu talagalay bil kasta saacadaha Saacadaha kadib! Kaalay dhinaca Xarunta Hal-abuurka Xaafadda si aad u cabto, ula qabsato deriskaaga, oo aad wax badan uga barato waxa ka dhacaya Dutchtown.
Raadi wax badan oo ku saabsan DT2 Saacadaha Kadib: Cusboonaysiinta UrbanMain
Nadiifinta Maalinta Dunida
Dhacdo on Abriil 24th @ 9:30 am
At Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada
Ururada Dutchtown iyo Maalinta Dhulka 365 ayaa isku kaashanaya nadiifin at Marquette Park iyadoo loo dabbaaldegayo Maalinta Dhulka! Ku soo biir deriskaaga Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada si aad u soo qaadato qashinka oo aad uhesho jardiinada kahor xilli mashquul ah oo ku taal Marquette.
Raadi wax badan oo ku saabsan Nadaafadda Maalinta Dunida
Dhacdo on Abriil 27th @ 5:30 pm
The Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown Guddiga Agaasimayaasha waxay qabtaan shirar bille ah si ay ugala hadlaan ganacsiga Xarunta CID-da ee Dutcht iyo inay ka helaan jawaab celin ka Guddiyada Dutchtown. In kasta oo codbixinta ay ku xaddidan tahay xubnaha guddiga, dhammaantood waa lagu soo dhaweynayaa inay ka soo qayb galaan shirarka oo wax badan ka ogaadaan CID guud ahaan.
Waxbadan ka ogow Shirka Gudiga Maamulka CID ee Dutchtown
Dhacdo on Meey 5th @ 9:00 am
Raadi wax badan oo ku saabsan DT2 Saacadaha Kahor
Dhacdo on Meey 6th @ 6:00 pm
Guddiga Naqshadeynta Dutchtown wuxuu ka shaqeeyaa hagaajinta waxyaabaha jireed ee xaafadda, isagoo ilaalinaya dabeecadda dhabta ah ee bulshada iyo dareenka goobta Waxaan eegeynaa dhismayaashayada taariikhiga ah iyo meelaha caamka ah waxaanna raadineynaa siyaabo aan ku horumarin karno hantidan qiimaha badan.
Faahfaahin intaa ka badan ka ogow Shirka Guddiga Naqshadeynta ee Dutchtown
Dhacdo on Meey 11th @ 6:00 pm
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan Shirka Guddiga Dhaqaalaha ee Dhaqaalaha Dutchtown
Dhacdo on Meey 13th @ 6:00 pm
Faahfaahin intaa ka badan ka ogow Shirka Gudiga Dhiirigelinta ee Dutchtown
Maalinta Shaqada Beerta VAL
Dhacdo on Meey 14th @ 1:00 pm
At Beerta Beesha VAL
Bannaanka u ah Beerta Beesha VAL ayaa la kaashanaya Cagaarka Greenway iyo mutadawiciin kale inay beerta si wanaagsan uga bilaabaan xagaagan!
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan VAL Garden Workday
Dhacdo on Meey 18th @ 6:00 pm